टिचिङ्ग लाइब्ररीमा प्रिय साथी र म – जनस्वास्थ्य खबर
बिशेष रुपमा शान्त बातावरण । तर कहिलेकसो खस्याकखुसुक आवाज । मान्छेहरुको साउती गरेको आवाज । किताबहरुको घर । टेबुल र कुर्सीको लाम्बद्ध सजावट । उत्तरी भित्तामा घडी । दक्षिणको भित्तामा कुनै बैज्ञानिकको फोटो । पूर्वको भित्तामा गौतम बुद्धको तस्बिर । दराजहरुमा राखिएका पुस्तकहरु । सबै पुस्तकमा कोडिङ । केही पुस्तकहरु टेबुलमा । प्रबेश गेटमा छाते टोपी लगाएका कर्मचारी आज मोबाइलको स्क्रिनमा ब्यस्त हुँदै रमाउदै हाँस्दै छन् । कहिलेकसो घुरेको पनि भेटिन्छ । यो सबै एउटा पुस्तकालयको विवरण हो । पुस्तकालयमा टहल्न पर्‍यो भनेर म त्यो बातावरणमा प्रबेश गरेको छु । ।
मसँग धेरै दिनका प्रश्नहरुको लिस्ट छ । हरेक दिन प्रश्नहरु जन्मिन्छन् । कहाँ बाट पो सुरु गर्ने हो । कुन महत्वपूर्ण प्रश्नबाट गर्ने हो ! ! उत्तर त खोज्नुपर्‍यो भनेर दुइटा किताब निकाल्छु । टेबुलमा तेर्स्याउँछु । पल्टाउने आँट बटुल्छु । कत्ति मोटाएको किताब रहेछ ! ! पल्टाउँछु म आत्मबिश्वास बटुलेर । केही बेर “टेबल अफ कन्टेन्ट्स” हेर्छु । एउटा “टपिक” पढ्न थाल्छु । पहिले कता कता पढे जस्तो लाग्ने । तर सोच्दा केही नअाउने । पढ्दै जान्छु । बिचमा उठ्न मन लाग्छ । यताउता हेर्छु । हाइ हाइ आउँछ मलाई । किताब समाउँदैमा पढ्न आउने भए ति दराजहरु कति बिढ्वान् हुन्थे होला हगि ! ! सबै ध्यानमग्न छन् । कोही “नोट” बनाउँदै छन। त्यही नोट पछि गएर “ नोट”कमाउन मद्धत गर्ने आश छ होला सबैलाई । जिवन त मृगत्रीष्णा जस्तै हो । कहिल्यै पूरा नहुने इच्छाहरुको पोको ।एकपछि अर्कोको मुसा दौडमा । कोही मोबाइलमा ब्यस्त छन्। कोही भिडियोबाट पढ्दै छन्। । एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा पढ्ने माहोल छ । यसो बिचार गर्दा यो लाइब्ररीबाट कती जना पढेर निस्किए होलान् । सफल भए होलान् । सबैको साक्षी भने तिनै किताब र फर्निचर ।
पढ्दै गर्दा अगाडि एक जना नानी आएर बस्छिन् र पढ्न थाल्छिन् । एकाग्र किताबमा ध्यान छ उनको । मेरो भने ध्यान भंग छ । रुमानी सम्झना सल्बलाइरहेका छन। यस्तो त कहिल्यै हुँदैनथ्यो मलाई । हल्का छ मन । कपासको बाटोमा हिंडेको जस्तो हलुका महसुश हुँदै छ । उनले आज कपाल हल्का छोडेकी छन् । नाकको डाँडीमा चिप्लिने ठुलो गोलाकार चस्मा लगाएकी छन्। रातो टि सर्टमा कत्ति सुहाएको । अचेल चलेका कोरियन सिरियलको प्रभाव होला ! चिउँडोमा सानो खोपिल्टो छ । अनुहार लाम्चो लाम्चो छ । अरु दिनभन्दा निकै सुन्दर देख्छु आज मैले । स्लिम छिन् । फिट छिन् । किताब ,नोट बुक र डटपेनको साथमा एकाग्र छिन् उनी । स्मार्ट फोन मुस्कुराउँदै छ किताबको साइडमा । “ कुन बेला सबैलाई डिस्ट्र्ब गर्छु ” भनेर । स्मार्ट जो हुनु छ । नभन्दै घन्टी बज्छ । मिठो रिङ्ग टोन रहेछ । एउटा अँग्रेजी गीतको । “ आल अफ मि “ । अत्तालिन्छिन् उनी । फोनमा कुरा गर्न उठ्छिन् र बाहिर जान्छिन् । म भने पून: एकाग्र हुने कोशीस गर्छु । तर एकाग्रता पूर्ण छैन आज मेरो ।
उनी फर्किन्छिन् केही बेरमा । तर शायद कुनै हतार थियो होला । आफ्ना किताब कपी बटुलेर हिँड्छिन् । अनुहारमा खुशीको रङ देख्न सकिन्छ । । कुनै राम्रो घटना हुनुपर्छ । उनी सेकेन्डसेकेन्ड हुँदै बिलिन हुन्छिन् । उनको आकार सानोहुँदै कणसरी बिलाउँछ । उनको आकारसङै अर्को एउटा आकार पनि जोडिन पुग्छ । दुईटा आकार एकाकार हुन्छन् र हराउँछन् । यसरी उनी हराउँछिन् ’जान्छु ‘ पनि नभनिकन । म एकोहोरो हेरिरहन्छु । फर्केर हेर्छिन् कि भन्ने आशमा । । तर एकाएक बातावरण शून्य हुन्छ । केही गुमाएको जस्तो लाग्छ । कोही टाढा गएजस्तो लाग्छ । मन मलिन हुन्छ । गर्हौ हुन्छन् खुट्टा । धेरै पटक भेट नभएपनि उनिसँग बेला बेला कुराकानी हुने गरेको थियो । राम्रै कुराकानी भएको थियो। तर आज उनले मलाई चिनिनन् । हुन सक्छ मलाई देखिनन् । मलाई किन चिनिनन् त भन्ने कुराले मलाई निकै सतायो । पहिलेपहिले जस्तै मिठो मुस्कान दिएर हृदय प्रफुल्लित भएको भए म धन्य हुने थिएँ होला । मनको अशान्तिको दर्शन भइरहेको थियो आज मलाई । मन स्थिर र एकाग्र हुन्थ्यो पहिले । उनलाई मेरो मनको मनोभाव मैले प्रकट गरिसकेको थिएँ । शायद त्यसैले होला मलाई उनले बिस्तारै चिन्न छोडेकी । “ रेजोनेन्स “ मिल्न लागेको दुई मनको ” लिन्केजमा ” कतै ”म्युटेसन ” भएछ । उनको मनमा कुनै अर्को तत्वले मेरो “लिन्केज” लाई ” रिप्लेस“ गरेछ । “ डिस्प्लेस ” गरेछ । रसायनशास्त्रमा जस्तै शक्तिशाली मोलिक्युलले कमजोर मोलिक्युललाई बिस्थापन गरेजस्तो ।
यस्तैमा मेरो शरीर गर्हौ हुँदै आउँछ । पार्श्वमा मिठो धून सुनिन्छ ” ॐ माने पद्मे हम ” । “ॐ माने पद्मे हम ” । हात खुट्टामा चिसो तरङ सल्बलाउँछ । सिरिङ्ग हुन्छ । आँखा खुल्छ बिस्तारै । चकटीमा हुन्छु म । पलेँटी कसेर बसेको । ध्यान गर्ने प्रयासमा ध्यानमुद्रामा । त्यो धूनले “ अडिटरी ” प्रणाली हुँदै मस्तिस्कमा प्रबेश गर्छ । । मन आनन्दित तुल्याउँछ । संसार क्षणभङुर छ भन्ने तत्व ज्ञान खुल्छ । अनी आजको लागि तयार हुने आँट बटुल्छु । आजको दिन सार्थक जो बनाउनु छ मलाई । मनको सबै त्रिश्णा आजलाई बिलिन हुन्छ । उनी पनि बिलिन हुन्छिन् । तयार हुन्छु म आफ्नो कर्मयात्रामा । भित्तामा टाँसिएको एउटा पोस्टरमा दृष्‍टि पर्छ । “ रहेछ संसार निशासमान । आएन जिउँदा रहँदा नि ज्ञान । न भक्ती भो न ज्ञान न बिबेक ।“ महाकवि देवकोटालाई नमन गर्छु मनमनै । मनमा चयन छ भने जीवन बाटो नै मधुवन !!
मिसिङ यू ।
वेटिङ यू ।
साभार डा शम्भु खनालको ब्लग बाट<